Wefdi Uu Hogaaminayo Safiirka Faransiiska U Fadhiyay Djibouti Oo Madaxweynaha Cusub Ku Booqday Gurigiisa | Araweelo News Network (Archive) -
Wefdi Uu Hogaaminayo Safiirka Faransiiska U Fadhiyay Djibouti Oo Madaxweynaha Cusub Ku Booqday Gurigiisa
Hargeysa (ANN) Wefdi uu hogaaminyo Safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Jabuuti Mr. Dominic, ayaa maanta ka soo degay madaarka caalamiga ah ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. waxaana wefdiga halkaa kusoo dhoweeyay wakiilka Somaliland u fadhiya dalka Faranasiiska Mudane Cali Sheekh, xoghayaha arrimaha debeda ee xisbiga Kulmiye Dr.Maxamed C/llaahi iyo masuuliyiin kale oo ay ka mid ahayd Marwo Adna Aadan Ismaaciil.
Waftiga oo qolka nasashada warbixin kooban oo ay kaga hadlayaan ujeeda safarkooda ku siiyay saxaafada, waxa uu safiirkii hore oo hogaaminayay wefdigu sheegay in aanay ahayn markii ugu horeysay ee uu yimaado, balse uu mar horena yimi Somaliland . sidaa awgeed uu ku faraxsan yahay doorashadii Somaliland ka dhacday sidii wanaagsanayd ee ay u qabsoontay, isla markaana uu u hambalyeynayo shacbiga Somaliland meel kasta oo ay joogaan. Waxa kale oo uu ka hadlay safiirku sidii loola dagaalami lahaa budhcad baddeeda ku soo badatay mandaqadan.
Weftigan ayaa waxa kale oo ay ka warameen sida Somaliland horumarka u gaadhay, isla markaana beesha caalamku indhaha ugu hayso waxa ay qabsatay iyo isbedelka ka dhacay ee dhinaca doorashooyinka, waxaanay bulshada Somaliland ku guugaabiyeen in halkaa ka sii amba qaadaan horumarka iyo wadajirka ay muujiyeen.
Xubnaha Waftiga ka socda dalka Faransiiska ee uu hogaaminayo Ambasador Dominic, waxa ka mid ah mudanayaal ka tirsan baarlamanka dalkaa iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan wasaarada arimaha dibeda. Ujeedada socdaalkooda ayaa waxay ku micneeyeen xoojinta xidhiidhka ka dhaxeeya labada dal iyo weliba sidii ay u hambalyeyn lahaayeen madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa, ka dib doorashadii dimuqraadiga ahayd ee Somalailand ka qabsoontay 26kii bishii Juun.
Madaxweynaha la doortay Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo weftiga ku booqdeen guriga uu degan yahay ayaa si diiran u soo dhaweeyey, isagoo uga mahadceliyey socdaalka uu ku yimi weftiga faransiisku. Madaweynaha la doortay waxa ku weheliyey qaabilaada weftiga madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici, guddoomiye ku xigeenka xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi, xoghayaha guud ee xisbiga Kayse Xasan Cige iyo masuuliyiin kale.
Wefitgu waxa kale oo ay booqdeen deegaamo ay ka mid yihiin degmada Laas Geel iyo goobo kale oo ka tirsan gobolka Saaxil.